Maxay Priyanka Chopra Ka Tiri Qaabka Markasta Loola Barbardhigo Deepika Padukone? - Hablaha Media Network
Maxay Priyanka Chopra Ka Tiri Qaabka Markasta Loola Barbardhigo Deepika Padukone?
HMN:- Priyanka Chopra iyo Deepika Padukone ayaa shaashadda wadaagay waxaana sannadkii 2015kii kasoo baxay filimkii ugu wanaagsanaa waana Bajirao Mastani. Si kastaba ha ahaatee, labadaan atariisho ee u dhashay India isla markaana dhowaan ku biiray Hollywood si joogto ah ayaa la isku barbardhigaa.
Deepika Padukone iyo Priyanka Chopra muran la’aan waa labada atariisho ee xilligaan ugu saameynta badan Bollywood. Tayadooda ayaana sabab u ah in si joogto ah la isku barbardhigo.
Dhawaan, Deepika ayaa ku garaacday Priyanka abaalmarinta Sexiest Asian Woman 2016 iyadoo taageereyaasha adduunku ay ugu codeeyaan Gabadha Ugu Soo Jiidashada Badan Qaaradda Asia.
Si kastaba ha ahaatee, PeeCee afar jeer ayey ku guuleystay abaalmarintaan Sexiest Asian Woman ee ay bixiso majaladda Eastern Eye Newspaper ee uu fadhigeedu yahay dalka Britain.
Markii wax laga weydiiyey qaabka loola barbardhigo Deepika, Priyanka ayaa ku jawaabtay: “Waxaan labadeenuba nahay isku shaqo, sidaas darteed waa wax iska caadi ah inay saxaafaddu markasta isbarbardhig nagu sameeyaan.
“Waana wax wanaagsan. Waxaan ula jeedaa micnaha dadku waa inay sameeyaan waxay ay doonayaan inay sameeyaan. Waxaanse u maleynayaa inaan labadeenuba caan nahay laakiin ay jiraan waxyaabo aan ku kala bedelanay. Waxa ugu weyn ayaase ah inaan nahay shaqsiyaad xirfadleyaal ah oo garanaya shaqooyinkooda.”